FSX ho an'ireo izay tsy maintsy manomboka
Idea FSX ho an'ireo izay tsy maintsy manomboka
9 volana 1 andro lasa izay #975 by DRCW
Andao hiatrika izany,
FSX dia dingana arahin'ny fianarana fa tsy ny fomba hahatongavana ho mpanamory virtoaly. Izay rehetra manodidina ny sakana dia hilaza aminao
Mety ho sarotra izany rehefa manao fahadisoana ianao ary mila mamerina mameno ny FSX ary manomboka. Mazava ho azy fa tsy mety mihitsy
ho ahy (LOL) Ity manaraka ity dia fanambarana mikasika ny zavatra nianarako nandritra ny taona ary manantena aho fa hanampy anao amin'ny fanatrehana ny fotoana voalohany na
fanavaozana ny FSX Deluxe na Gold Edition.
FIZARANA 1: Fitaovana fiara sy mpamily
Alohan'ny fametrahana FSX ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny manome antoka fa manana sehatra tsara sy azo antoka ianao. Mety hieritreritra ianao
fanavaozana ny PC amin'ny addng RAM / sehatra fiara hafa etc ... Ny mpiremby na gamer dia hilaza aminao rafitra manitatra
manao ny fahasamihafana rehetra. FSX dia mandeha tsara amin'ny processeur kernel quad core na kokoa amin'ny 4 ghz na avo kokoa.
Olona maro mihoatra noho ny fametahana ny processeur Ohatra 3.2 ghz mankany 4ghz .. na 4ghz mankany 4.5ghz. Nahoana àry izy ireo no manao izany? satria
FSX dia tena miankina tanteraka amin'ny processeur ary hisy foana ny olona manosika ny rafitra ho eny amin'ny sisiny. Tian'izy ireo
mirehareha momba ny 200 fps amin'ny aterineto. Midika ve izany fa manana ihany koa ianao? TSIA ... Amin'ny fiovana rehetra ataonao amin'ny rafitrao
eo ambonin'ny tsipika momba ny orinasa dia misy ny loza mety hirediredy ny fitaovana ampiasainao, raha tsy fantatrao izay ataonao,
Miaraha miasa amin'ny zavatra anananao sy izay azonao afindrany.
Mba hampandehanana ny milina Masera FSX mba hahafahanao mandanjalanja tsara ny sary sy ny tanjona dia ny tanjona
Hahazo ny sary tianao sy ny tahan'ny 30 fps. Ny tena manan-danja dia tsy misy fiaramanidina tsy misy dikany. Manana 8 core AMD aho
Ny processeur mihazakazaka ao 3.5ghz sy izaho dia nameno azy io saingy ny 3.7ghz ihany koa dia nampiditra mpankafy fanampiny tao amin'ny tilikamboko
izay natao ho an'ny fanadiovana sy fanalana rivotra. Raha nividy ordinatera avy amin'ny mpivarotra eo an-toerana ianao, dia tokony hanana
Ny fanovana ny tilikambo ary ny fivarotana maro dia tsy azo lavina. Ny ordinatera mampiasa fitaovana fampiasana rindrin-tseranana dia mampifandray anao
Ao anatin'ny rindrina angamba dia rafitra tsy manam-pahaizana.
dia zava-dehibe. Raha toa ianao ka matoky momba ny fahatsiarovan-tena ary maniry hamorona rindrambaiko vitsivitsy hafa (Scenery, fiaramanidina, rahona
etc ..) Mila farafaharatsiny 1TB ianao. Manoro ny fiara sarotra 2TB aho. Manoro ihany koa aho amin'ny fampiasana fiara mafy misaraka
Ny fiara mafy manana varavarankely efa napetraka eo.
Haniry hampiasa RAM (DDR3 sns ...) ny minitra ilainao minitra dia ilaina ny RAM 4 nefa ianao tena
Tokony handinika fandefena 8 ho an'ny FSX miaraka amin'ny rafitra iray izay afaka manitatra amin'ny 32 gig RAM noho ny lalana.
Eto no ahafahanao mandany vola $$$. Misy karatry ny rano manaloka izay mihodina manodidina ny $ 1500 US. WOW tsy afaka aho
izany! Mila carte graphique tsara ianao izay afaka mihazakazaka manodidina $ 150 US. Mampiasa ny 2 AMD Radeon R9 200 Series aho
Sarintany mihidy ao Firewire. Ny karatra tsara napetraka dia hanampy amin'ny famoahana ny enta-mavesatra amin'ny processeur. Misy
karatra marobe avy eo ka noho izany ny toro-hevitra tsara indrindra dia ny fikarohana ary mahazo ny bangahy tsara indrindra amin'ny boka anao. Ny fikarohana FSX forum dia hanampy anao
amin'ny fanapahan-kevitra tsara ny fotoana voalohany.
Nisy olana izay nahatonga ireo mpamily Graphic Card nampisy fahadisoana be loatra tao amin'ny FSX. Alohan'ny hividianana sary
karatra mijery raha afaka mahita olan'ny fantatra miaraka amin'ireo mpamily karatra na ireo fitarainana hafa ao amin'ny FSX ianao. Raha tsy izany ianao
manana olana amin'ny karatra misy anao amin'izao fotoana izao ary manao fampivoarana mpamily ianao ary tampoka dia misy olana,
Miverena any amin'ny mpamily farany napetrakao.
Overkill, Overkill, Overkill !!! Irinao ny fitaovam-pifandraisana izay nomena ny fitaovana ampiasainao. Izany dia hamela anao hanampy na
Miovaova ny fitaovana raha tsy mamela ny famatsiana herinaratra anao. Manana fitaovam-piadiana herinaratra 1000 aho mihoatra ny avo roa heny
mila mampiasa ny solosaina aho.
Ny fikarohana sy ny fiomanana mialoha dia ny fanalahidy alohan'ny fametrahana FSX.
Fizarana 2: Fametrahana sy fanitarana FSX
Ankehitriny rehefa nandrakitra ny fototry ny fanomanana isika dia andao isika hametraka FSX. Aoka ho fantatra fa natao ity torolàlana fametrahana ity
FSX Deluxe sy Gold editions tsy dix FSX izay mampiasa endrika hafa.
Inona àry ny fahasamihafana eo amin'ny Deluxe sy ny Gold?
Ny diksionera Deluxe dia tsy tonga amin'ny fanaparitahana X ary izany no izy. Raha manana ny Deluxe version ianao, dia ho
mila mametraka SP1 ary SP2. Miaraka amin'ny fanontana volamena dia ampidino fotsiny ny rakitra fikandrana taorian'ny fametrahana ny rakitra 1 sy 2
dingana 1: Alohan'ny hametrahana ny rakitra 1 & 2 dia mamorona lahatahiry iray ao amin'ny rakitrao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny lahatahiry vaovao / havanana
Lazao ilay folder "FSX" ary zarao any amin'ny biraonao. Rehefa mametraka ao amin'ny FSX disk 1 dia misafidiana safidy bebe kokoa ary avy eo manompoa
ny lahatahiry FSX eo amin'ny biraonao noforonina. Izany dia hampianatra ny FSX hametraka ny programa ao anatin'io lahatahiry io fa tsy
Fichier Programmes (x86)
Raha vantany vao vita ny rakitra 1 & 2 dia manomboka automatique ny FSX. Amin'izay ianao dia hampirisika anao hametraka ny code famokarana vokatrao
ary hizara ilay fandaharana. Aorian'ny famindrana dia tsy manamboatra fanaparitahana (Gold) na mametraka SP1 naSP2 (Deluxe)! Voalohany
FSX amin'ny maodely fiaramanidina maimaim-poana mandritra ny segondra vitsy dia afoy amin'ny programa.
dingana 2: Manaova famenam-bidy (volamena) SP1 & SP2 (Deluxe). Fa ny fanontana volamena dia manomboka FSX ary indray mandeha ihany
Ampirisiho ny hametraka ny fanalahidin'ny entam-barotra ho an'ny fanaparitahana azy mba hizarana azy. Amin'izay ianao dia hisarika anao hamela ny FSX
mba hanampiana ireo endri-tsoratra vaovao ho an'ity sakan'ny fanitarana ity. Misafidy Ja. Manomboka ny FSX indray ary manamboatra ny fandefasana fiaramanidina maimaim-poana
segondra vitsy ary avy eo miala amin'ny fandaharana.
dingana 3: ( Alefaso ity dingana ity raha toa ka manana 1 ihany ianao) Raha manana fiara manokana ianao maniry ny hanolo-tena
Ho an'ny FSX dia izao no fotoana handikana sy hametahana an'io fiara io.
Aleo lazaintsika fa ny varavarankely dia apetraka eo amin'ny drive C: ary manana fiara iray tsy mandeha D: koa miditra amin'ny PC ianao. Select
Kopia ary ampidiro ny ordinateran'ny FSX eo amin'ny biraonao mba handefa D: Ity dingana ity dia handray ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra.
Raha vao vita kopia dia mila sora-bolana vaovao ianao mba hahafahanao mampiasa FSX avy amin'ny biraonao. Alefaso aloha ny rakitra ankehitriny
eo amin'ny biraonao eo amin'ny kitapo. Mandehana amin'ny Drive D ary sokafy ny folder FSX. Alefaso ho any amin'ny FSX.EXE tahiry fampiharana,
tsindrio eo ankavanana ary mifidiana "mamoròna fohy"afindra amin'ny biraonao eo amin'ny biraonao izany. Amin'izao fotoana izao dia hamela anao hampiasa FSX izany
hitsin. ONce indray ny FSX amin'ny fandefasana fiaramanidina maimaim-poana izay ahazoana antoka fa mahomby ny fandaharana. Azonao atao ny mamafa ny ordinatera FSX
eo amin'ny biraonao. Hihazakazaka FSX ianao amin'ny drive D: manomboka izao.
Dingana 4: Windows Vista, 7 ary 8 mametraka ny UIAUTOMATIONCORE.DLL amin'ny FSX.
Ilaina ilaina ny rakitra uiautomationcore.dll mba hisorohana ny fandefasana marika malaza ao amin'ny FSX. Ny zava-dehibe indrindra
Tsy maintsy mametraka ny dll marina ianao amin'ny fikandrana windows. Ny fametrahana ny ratsy dia mety hiteraka olana bebe kokoa. Mandeha
ny motera fikarohana ary karazana uiautomaioncore.dll ho an'ny Vista / ho an'ny windows 7 / ho an'ny windows 8 / ho an'ireo windows 8.1 izay
OS azonao. Rehefa hitanao ny dikan-teny marina dia alaivo any amin'ny biraonao izy ary apetraho ao amin'ny lahatahiry FSX anao tsy misy
aiza ny toerana !!! Mitahiry dika mitovy amin'izany ao amin'ny lahatahiry dokam-barotra ho toy ny back-up.
Dingana 5: Amboary ny fanovana ao amin'ny FSX.
Manandrama FSX ary manova safidy malalaka amin'ny sehatra. Eto no ahafahanao manova sary, rahona, fitaterana sns ... Afaka manoratra aho
dingana isan-karazany, saingy misy lahatsary fampianarana lehibe ao amin'ny youtube. Ao amin'ity lahatsary ity dia alefaso ny fampiasana ivelany
ny fitrandrahana ny tahan'ny rindrambaiko saingy nahita olana aho tamin'ny fikorotanana sy ny fiatoana amin'ny fiaramanidina mba hamporisika ny fametrahana ny tahan'ny FSX
fametrahana ny 30 fps na ny antsasaky ny taham-pamokarana amin'ny mpijery video. Raha toa ka ny 70 ampiasaina dia ny rafitra fanamafisam-peo
limiter amin'ny 35 fps.
dingana 6: Atao ny FSX
Raha vantany vao vita ny fanovana nataonao ary voamarina amin'ny fomba fitaterana maimaim-poana ho an'ny fps tsara indrindra sy ny famoronana anao
Ny rafitra dia afaka manafaka anao ho te hitazona azy ireo any. Mila ampiharina izao isika izao FSX.CFG tahiry. Nanoratra kofehy aho tamin'ity
forum ao amin'ny sehatra FSX General mitondra ny lohateny hoe "FSX Fixes & Tips ao amin'ny cfg" Jereo ny fizarana 1 izay mandrakotra ny fototra 3
fanovana ilaina ao amin'ny FSX. Misy lahatsoratra sy lahatsary maromaro any miaraka amin'ireo fepetra hafa azonao jerena. Tohizo ny mihazakazaka
FSX ary tsapao izany aorian'izany. Ny 3 voalohany voatanisa ao amin'ny lahatsoratro dia azo ampiharina manomboka amin'ny fotoana iray, saingy misy fepetra hafa
Aorian'izany dia tokony arahina amin'ny alàlan'ny famokarana FSX mba hahitana ny fiantraikany eo amin'ny asa ataonao. Raha tianao izany, tandremo. Tsarovy
ny fehezanteny " Raha tsy tapaka izy io ... AZO AMPIASA ITY "
Ampiasao ny rakitra fsx.cfg mba hampisy fiovana eo amin'ny toetoetry ny toerana fa tsy ny fikandrana ao amin'ny programa FSX satria izy io
mitandrema ny sasany amin'ireo fanovana nataonao ao amin'ny fsx.cfg mba hamerenana azy indray amin'ny alalana.
dingana 7: Ampio ireo Add-ons
Rehefa avy nandinika sy nandantana ny FSX ianao amin'ny sidina lava sy fohy miaraka amin'ireo dingana etsy ambony, dia manomboka mametraka ny anao
hametraka-on ny Iray amin'ny fotoana TSY MAINTSY MITADIAVAKA HAHATAKATRA AN'ILAY OLONA. Raha izany dia misy olana tokony hipoitra.
Te-hanaja anao aho hahafantaranao izay toerana tokony hijerena! Zavatra iray tiako hampitaina dia ireo programa azonao nividy izay fantatra
toy ny rindrambaiko booster ho an'ny FSX. Izy ireo dia tokony hanatsara ny fahombiazany. Ny zavatra rehetra azoko lazaina (raha ny hevitro) Aza kivy ianao
Jereo ao amin'ny loha manaraka!
Fotoana mamorona pejy: 0.098 segondra